Indlu encane emathafeni - I-Airbnb
Indlu encane emathafeni
Saint-Éloi, Quebec, i-Canada
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Céline
U-Céline Ungumbungazi ovelele
Indlu enhle yekhulunyaka, efudumele, enhliziyweni yendawo yaseBas St-Laurent. Uzothola ubuqiniso bendawo yezolimo enombono omangalisayo womfula nokushona kwawo kwelanga. Edolobhaneni lase-St-Éloi, uphakathi kwayo yonke into! Ibhishi likamasipala, amapaki kazwelonke, indlela yamabhayisikili, indlela yokuhamba, ukubuka imikhomo, imikhiqizo yasendaweni, igalofu, njll. Uzolahlekelwa ukukhetha kwakho ukuhlala izinsuku zakho kanye nesidleke esithokomele ukuze uthole ukuphumula okufanele!
Indlu inikeza zonke izinsiza endaweni enhle kakhulu. Kunamakamelo okulala amane, elilodwa liphansi futhi amathathu phezulu. Emakamelweni akho (3/4) uzothola izindawo zamanzi (osinki). Kunamagumbi okugezela amabili agcwele, eyodwa iphansi phansi (yakudala) kanti enye esitezi esiphezulu ilungiswe ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, umshini wokuwasha nokomisa kungaba onawo ukuze uhlale izinsuku eziyi-10 noma ngaphezulu.
E-Saint-Éloi, ucwile emvelweni! Ngakho-ke unokufinyelela okulula kakhulu endleleni yebhayisikili (umgwaqo oluhlaza 1) kanye nomzila wezinyawo kazwelonke (umzila wokuhamba) ukusuka endlini. Thatha ithuba lokuvilapha eduze komfula iTrois-Pistoles!
Ngisesandleni sakho ekuqaleni kokuhlala kwakho ukuze ngikwamukele futhi ngikwenze ukhululeke ngezindawo. Uvela kude? Ngizozinika isikhathi sokukuqondisa futhi ngiphendule yonke imibuzo yakho!
UCéline Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Saint-Éloi namaphethelo